संवैधानिक इजलासमा चलेको बहसलाई ‘तमासा’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई मानहानिको मुद्दा लाग्दैन ? - Sankalpa Khabar
संवैधानिक इजलासमा चलेको बहसलाई ‘तमासा’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई मानहानिको मुद्दा लाग्दैन ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समय आफ्ना विरोधीलाई मनपरी बोल्दै हिँड्न थालेका छन् । आफू विरोधीलाई उनले अशिष्ट र गालीगरौज गर्न थालेका छन् । आफूले चालेका कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले आफ्नो धैर्यता गुमाएका छन् ।
यसैक्रममा ओलीले शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता ९४ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि दुर्वचन बोलेका छन् । उनीप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गएर भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भनी बहस गरेपछि ओली उनीप्रति आक्रामक भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीले ‘तमासा देखाउन सर्वोच्च लगिएका बाजे वकिल’ भनेर मानमर्दन गरे ।
ओलीले यसरी होच्याएको र गिज्याएका भण्डारीलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशसम्मको पद अफर गरेका थिए, तर उनले राजनीतिक स्वतन्त्रता रोजे । भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाए । जसले पञ्चायतमै बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह र केआई सिंहको पक्षमा मुद्दा लडे । यस्ता वरिष्ठ विद्वानविरुद्ध आगो ओकलेर ओलीले आफ्नो साख माटोमै मिलाएको टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
त्यति मात्र होइन, अदालतमा बहस चलिरहेको विषयलाई ओलीले तमासा देखाउन लगिएको भनेर अवहेलना गरेकाले उनीमाथि मानहानिको मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड
२१ फाल्गुन १६:३२